velona amin’ny chat
Ny fiainana ao amin’ny finday tontolo izao ny zava-drehetra izay miova haingana dia haingana, izany dia mitaky avy hatrany ny fanehoan-kevitra avy amin’ny raharaham-barotra.
tapitrisa ny Rosiana, ary izany no ¾ ny isan’ny mpampiasa Aterineto, fara fahakeliny, -potoana iray volana fampiasana finday avo lenta ho an’ny Aterineto ny lomano.
Ireo antontan-kevitra mitarika ny manam-pahaizana nandritra ny taona
tapitrisa ny fidirana amin’ny Aterineto ihany no avy amin’ny finday fitaovana. Hijery ny fandaharam-potoana, izay ahitana fitaovana malaza ho an’ny sokajin-taona hafa.
Ny reny sy ny renibe mazoto fampandrosoana ny finday Aterineto ny fomba fijery ao amin’ny YouTube cake fomba fahandro na zavatra hafa mahaliana vaovao, baiko entana.
Fomba haingana ny mpanjifa dia tsy hamaha ny olana
Izany dia miankina aminao, ny raharaham-barotra solontenan’ny.
Voasakantsakan’ny vs fivezivezena
Ny computer mpampiasa mipetraka eo amin’ny seza mampahazo aina manoloana ny hanara-maso amin’ny avo fanapahan-kevitra.
Ny tanana maimaim-poana, izy dia mampiasa ny fafan-teny, ny totozy
Finday avo lenta mpampiasa finday: dia mitaingina eo ny fitateram-bahoaka, mandeha miaraka amin’ny ankizy, sasatra amin’ny namana. Izany dia mety hiteraka olana mba hameno any amin’ny sehatra maro ny taratasy fisoratana anarana amin’ny kely efijery.
Manatsara ny vohikala ho an’ny finday fitaovana sy ny hanatsorana ny fikarohana ny entana sy tolotra ho an’ny mpanjifa. Zava-dehibe ny manao ny tranonkala mora ho an’ny mpampiasa finday avo lenta: ny tokony download haingana na miadana Aterineto finday, tsy ny aretina ny ela textual famaritana sy sarotra pejy fikarohana.
Aza ela maso ny tranonkala optimisé ho an’ny finday fitaovana, ary miaraka amin’izay koa, mankasitraka ny loading ny hafainganam-pandeha avy amin’ny finday avo lenta.
Finday ny fiovam-po dia fifandraisana mivantana amin’ny mpanjifa amin’ny lasibatra
Ny fiovam-po ao amin’ny finday avo lenta sy ny takela-bato tsy manampy foana ny vokatra ny sarety sy ny checkout. Araka ny Google, amin’ny finday avo lenta ny tompon’ny mijery ny fanampiana fampahalalana momba ny vokatra an-telefaonina alohan’ny mividy sy mampitaha ny vidin-javatra eo amin’ny fivarotana. Mba hividy ny entana dia azo avy amin’ny fitaovana hafa na any amin’ny toeram-pivarotana.
Fividianana natao taorian’ny nijerena ny toerana amin’ny finday avo lenta, dia sarotra ny mamantatra izany, fa izy ireo dia tokony horaisina anaty kajikajy. Matetika dia ny fitadiavana ny akaiky indrindra store antso ho toro-hevitra, ka lahatsoratra ao amin’ny finday ho dikan-ny toerana vidin-javatra, ny adiresy sy ny ora fanokafana ny mpivarotra, mpanjifa famerenana.
Ny asa tandremo sao tsy mahita ny finday vahiny
Hanome azy fahafahana avy hatrany ny antso anao, na mba hanoratra izany hoe, noho izany, zava-dehibe ny fifandraisana miseho eo amin’ny pejy.
Araka ny filazan’ny mpikaroka, mihoatra ny iray ampahatelon’ny mpampiasa Aterineto fikarohana noho ny fifandraisana vaovao eo amin’ny tranonkala, amin’ny zavatra toy izany ho toy ny an-tserasera ny mpanolo-tsaina, mba hisarihana ny saina, sy ny nomeraon-telefaonina ny orinasa tsy maintsy ho ifandrimbonana.
Noho izany antony izany dia mirona ary isika fampivelarana ny finday vaovao. Ny mpanjifa mivantana afaka miantso na manoratra amin’ny alalan’ny na inona na inona mety fantsona ny fifandraisana karajia amin’ny aterineto, ireo tambajotra sosialy na avy hatrany iraka
← Apple Jereo Ny Teny Fampidirana Ny - Ofisialy Ny Lahatsary YouTube-Ny
Ny Mampiaraka toerana miaraka amin'ny sary →